25 taona, tsena manerantany
Tamin'ny taona 1996 dia nanomboka nampiasa ny marika "YUSHEN" ny YUFA, mila kalitao avo lenta hatrany ho toy ny critère, namokatra karazana vovoka alumina misy fikarohana sy fivoarana matihanina. Taorian'ny fivelarana sy fitantanana nandritra ny 25 taona, dia amidy tsara ny vokatra marika "YUSHEN" any amin'ny firenena 40 mahery eto an-tany. Nahazo ny zon'ny import sy export any China tamin'ny taona 1999, ary nanjary orinasam-pandrosoana fanta-daza any amin'ny faritr'i Azia-Pasifika, manana ny lazany eo amin'ny tsena iraisam-pirenena toa an'i Japon, Korea Atsimo, Alemana, sns.
Tandindon'ny kalitao, fiantohana amin'ny kalitao
Mba hahazoana antoka ny kalitao, ny YUFA Group dia manamboatra lafaoro lehibe 6 m amin'ny savaivony 24h. Tsy miala sasatra mihitsy amin'ny fenitra amin'ny fanaraha-maso ny fotoana sy ny mari-pana amin'ny fandrendrehana, miziriziry amin'ny famokarana vokatra avo lenta ary mandresy ny fanekena ny tsena amin'ny fifaninanana miaraka amin'ny kalitaon'ny vokatra milamina.
Olona tsy manana isika, manana olona tsara kokoa isika
Ny marika "YUSEHN" ambany sodium, ny sodium sodium, ny habetsahan'ny habe betsaka »ary ny karazan-tsokosoko mambotry ny corundum fotsy dia nohamafisin'ny tsena ary afaka mamokatra abrasive corundum fotsy namboarina sy novaina manokana arak'izay ilain'ny mpanjifa. Hatramin'ny 2008, ny "YUSHEN" marika abrasives corundum fotsy (F4-F220, P12-P220) ary ny vovoka alumina fotsy (F230-F1200, P240-P2500) dia notohanana ho "vokatra malaza amin'ny indostrian'ny fanararaotana any Shina".